FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULL MASTWEILER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull Mastweiler
Alika mitambatra Bullmastiff / Rottweiler
Diesel the Bull Mastweiler amin'ny faha-6 taonany— 'Diesel ity. Nanafaka azy tamin'ny tranon-jaza aho ary nizara alika mpamonjy iray hafa antsoina hoe Jake ny tranony. Diesel dia toy ny zoky lahy amin'i Jake ary soa ihany fa nifanaraka tamin'ny andro 1. Diesel dia mankafy mandeha sy milalao miaraka amin'i Jake. Mpankafy an'i Cesar Millan aho ary nianatra zavatra betsaka tamin'ny fampiofanana nataony. '
Ny alika Bull Mastweiler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bullmastiff ary ny Rottweiler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Carla the Bullmastiff, mix Rottweiler— 'Nanavotra an'i Carla tamin'ny foibe any Wales izahay. Nahita ny sariny tao amin'ny tranonkalany aho ary nianjera taminy. Natahotra be aho sao tsy azonay izy !! Nandeha an-tongotra 200 kilaometatra izahay haka azy ary sarobidy isan'ora izany! 3 taona izy, a Bull Mastiff , Rottweiler afangaro sy ilay zazavavy mahafinaritra indrindra, mpankato be ary tovovavy tony toy izany, saingy ho tiany ny sandwich saka raha azony natao. Hampikotrokotroka anao toy ny soavaly izy rehefa mihazakazaka, ary zazalahy matanjaka ve izy raha te-ho. Isan'andro dia nandeha tany an-jaridaina izy ary nanome tsipìka lalina lalina avy eo alohan'ny resaka amin'ny alika ampitan'ny arabe mandritra ny 5 minitra! Saingy indrisy fa narary tampoka izy ary tsy eo intsony eto amintsika. '
Carla the Bullmastiff / Rottweiler mifangaro
terera wheaten sy fifangaroan'ny retriever volamena
fifangaroan'ny heeler manga lehibe
'Luna dia alika kely mahafaly, matoky tena, gung-ho izay tena nandray soa tamin'ny torohevitra tao amin'ny tranonkalanao. Izy no alikako voalohany ary natahotra aho ny heriny rehetra , ary nanomboka naneho ny soritr'aretin'ny fihenjanana noho ny tsy fitarihana. Ankehitriny eo afovoan'ny Boot Camp , mbola miady kely aminy fa manomboka miala sasatra. Heveriko fa maivamaivana izy fa tsy mila miandraikitra intsony! Mandeha izahay mandeha in-droa na intelo isan'andro ary araho ny torohevitrao , manaraka hatrany aoriana izy, ambany loha, mitsiky. Tsy noheveriko hoe ho afaka hamaky ny sainy sy hisambotra azy aho alohan'ny / mandritra ny fanelingelenana, saingy tena mahagaga izany. '
'Ity no alikanay Ghana, aseho eto amin'ny 13 volana, 42 santimetatra ny halavany ary 75 pounds. Izy dia Rottweiler sy Bullmastiff mix (Bull Mastweiler). Alika mamy tokoa i Ghana. Izy dia hyper be raha vao mody ary rehefa omenao azy ny fitiavana dia milamina izy afaka 10 minitra eo ho eo. Izy tia fiheverana be dia be . Ankafiziny ny milalao alika hafa anisan'izany ny zokiny lahy, a ra feno Bullmastiff . Na dia alika an-trano aza izy dia mankafy ny any ivelany. Tiany ny ady amin'ny ady, hazakazaka haingana dia haingana izy ary tiany ny mijoro amin'ny tongony aoriana ary mandihy miaraka amiko. '
Ghana the Bull Mastweiler, aseho eto amin'ny 13 volana, 42 santimetatra ny halavany ary 75 pounds
pics ny fary corso alika kely
Ghana amin'ny maha alika kely azy 2 taona eo amin'ny tsena parasy milaza 'hi' amin'ny zazavavy kely
'Jereo ny zavatra hitanay! Ity fifangaroana Bullmastiff / Rottweiler lahy 11 taona antsoina hoe Mick ity no fanampiny farany lehibe indrindra ho an'ny fianakavianay! Milalao izy, mazoto, tia ny saina, mahay ary tiany mitsako ny zavatra rehetra miaraka amin'ny azy nifin-jaza maranitra izaitsizy ... na isika! Tena be fitiavana izy ary faly foana mahita antsika, na dia 5 minitra fotsiny aza izahay no tsy teo. Ny kilalao kilalao tiany no saka antsika. Tena nanolo-tena ho an'ny fianakavianay izy. '
Mick the Bullmastiff / Rottweiler hybrid puppy amin'ny 11 herinandro
Alefaso amin'ny alàlan'ny alika kely fotsy Bullmastiff / Rottweiler fotsy amin'ny 11 herinandro ny mainty
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler amin'ny taona 1 sy sasany, milanja 136 lbs
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler nihalehibe tamin'ny 4 taona, milanja 185 lbs
pyrenees mahafinaritra retriever volamena amidy
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler efa lehibe, mitsambikina eo am-pandriana
Waylon the Bullmastiff / Rottweiler cross, aseho eto amin'ny 8 taona miaraka amin'i Trevor namany
pug Boston terrier Mix alika
Waylon the Bullmastiff / Rottweiler cross, aseho eto amin'ny 8 taona miaraka amin'i Tom ny saka sy ny fianakaviana
Lisitry ny alika mitambatra Bullmastiff
labrador retriever staffordshire omby terrier mix
Retrievers volamena 4 volana